अमेरिका-अस्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौता गर्न बेलायत खुला
२०७६ माघ १८ शनिबार, ब्रेक्जिटको संस्मरणस्वरूप बेलायतले ५० पेन्सका ३० लाख सिक्कालाई शुक्रबारदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको छ। तिनमा जनवरी ३१ को मिति तथा ‘शान्ति, सम्पन्नता र सबै देशसँग मित्रता’ कुँदिएको छ। सिक्काले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। ब्रेक्जिटविरोधी कतिपयले यसलाई नस्वीकार्ने भन्दै आएका छन्। यसअघि सरकारले यो सिक्का पहिले तोकिएको ब्रेक्जिट मिति अक्टोबर ३१ मा नै चलनचल्तीमा ल्याउन खोजेको थियो। तर ब्रेक्जिटको मिति परिवर्तन भएपछि ती सिक्का फेरि पगालेर नयाँ बनाइएको हो। ... बाँकी अंश»
मानिसमा सरेका प्राणघातक भाइरसहरू जसले लियो करोडौंको ज्यान
२०७६ माघ १८ शनिबार, वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो भाइसय चिनियाँ क्रेट र कोब्रा प्रजातिको सर्पबाट मानिसमा सरेको हो। यो भाइरस पहिलो पटक सन् २०१९ को डिसेम्बरमा देखिएको थियो। अहिले यो भाइरस निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसबाट संक्रमतिको संख्या पनि १० हजार नाघिसकेको छ। यसको संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको छ। यसको औषधि पत्ता लगाउन अहिले विश्वभरका वैज्ञानिकहरुले काम गरिरहेका छन्। ... बाँकी अंश»
भक्त प्रह्लादको भक्तीको शक्ती, न पिताले मार्न सके बरु मारिए पिता नै
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रह्लादका पिता हिरण्यकश्यपु दुष्ट र अहंकारी थिए। सार्वभौमिकतामा प्रभुत्व जमाएर उनले जगतका जीवहरुलाई आफ्नो पूजा गराउन थाले । विद्यार्थीहरुलाई पनि विद्यालयमा उनी स्वयं भगवान् हुन् र उनको सिवाय भगवान नामको कुनै सत्ता छैन भनेर शिक्षा दिइन्थ्यो । उनको क्रोधबाट भयभीत भएर सबै उनको पूजा गर्थे । जब प्रह्लादलाई नारदजीले प्रभुको नामको क्रियात्मक ज्ञान दिए, तब प्रह्लादले आफ्नो पिताको पूजा छोडेर भगवानको पुजा गरे । प्रह्लालाई नाममा यति विश्वास थियो कि उनले नाना भाँति कष्ट सहेर पिताको विरोध गरे । ... बाँकी अंश»
के मृत पूर्खाले आफ्ना वंशजसँग सम्वाद गर्न सक्छन् ?
२०७६ माघ १५ बुधबार, काठमाडौं । पूर्खाको उपासना अथवा पितृपूजा कुनै न कुनै रूपमा पूरै विश्वमा मानिन्छ । प्रथाको प्रकार अनि विधिमा भिन्नता हुन सक्छ । कुनै संस्कृतिमा पूर्खालाई देवताको रूपमा उपासना गरिन्छ । पूर्खाको उपासना तथा पितृपूजामा आधारित यी दुइ भागको श्रृंखलामा हामी सामान्य आदर अनि सम्मान देखि लिएर पितृको पूजा सम्म विभिन्न प्रथाहरु अनि धारणाहरुको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यमा यो लेख रहेको छ । ... बाँकी अंश»
ओली देशका प्रधानमन्त्री कि स्वार्थ समूहका नाइके ?
२०७६ माघ १५ बुधबार, ‘स्वार्थ समूहको नेताजस्तो भएर प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालनमा आइनसकेको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण गर्नु (चिन भ्रमण) अनैतिक कदम थियो, स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले सुशासनको गफ गर्न सुहाउँदैन । राज्यको निकायमा काम गर्ने गरी सपथ ग्रहण नगरेका अनधिकृत व्यक्तिको राज्य स्रोतमा कब्जा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले राष्ट्र असफल हुनेमध्ये एउटा यस्तै कारणलाई मान्छन् । ‘ननस्टेक एक्टर्स’ मा डन, तस्कर, ठेकेदार, कमिसन एजेन्टलगायत बिचौलिया मात्र होइन, सल्लाहकार टिम समेत पर्छ ’ –निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल, नेपाल, माघ १२ । ... बाँकी अंश»
रहस्यमयी नोवेल कोरोना भाइरसको के छ रोकथाम ?
२०७६ माघ १५ बुधबार, कम्तिमा २० सेकेन्डको लागि साबुन र पानीले प्राय आफ्ना हातहरू धुने । यदि साबुन र पानी उपलब्ध छैन भने, अल्कोहोल रहित सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने -N95 मास्क( रोकथामका लागी उपयोगी) उपलब्ध नभएको खण्डमा सजिर्कल मास्क प्रयोग गर्ने ... बाँकी अंश»
नुन किन्न पैसा नभएका किसानले कसरी लादेर ल्याए सम्पत्ति ?
२०७६ माघ १४ मंगलबार, जौहरीको कुरा सुनेर सेठले किसानसँग त्यस पत्थरको बदलामा आफ्नो सारा धन दिए । जसलाई किसान बेल गाडिहरुमा लादेर आफ्नो घर हिडे । किसान जब त्यस धनलाई लिएर घर फर्किए तब उनले विचार गरे -'अरे मूर्ख! तैले त यस्तो अनगिन्ति पत्थहरुलाई घडाबाट निकालेर व्यर्थ नै फ्याकिस, जुन नदीको धारामा गएर विलीन भयो। काश ! तैले पहिले नै यस घडाको पत्थरहरुको मुल्य जान्थिइस।' किसान त्यस एक पत्थरले मालामाल भए । ... बाँकी अंश»
रामलाई आशंका गर्ने गरुडको संशय यसरी मेटे कागभुशुण्डीले
२०७६ माघ १३ सोमबार, काठमाडौं । भगवान बिष्णुका बाहन गरुडको मनमा प्रभु रामप्रति शंका हुन गयो, त्यो शंकाको निवारण गर्न उनी लोमश ऋषिकोमा गए। लोमश ऋषिले उनलाई सम्झाउँदै भने, प्रभु जसले साकार रूपमा संसारमा आएर लोक हितको निम्ति अनेक लीलाहरू गर्दछन्, उनी भगवानको अवतार हुन्छन्, उनीप्रति कहिल्यै पनि मनमा शंका राख्नु हुँदैन । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचारमा छानविन नगर्ने बाटोमा ओली
२०७६ माघ १३ सोमबार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट भएको र हुने भ्रष्टाचारका बारे छानविन नै नहुने र उच्च ओहोदाधारीबाट भएको भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोकेर कार्वाहीलाई खुम्च्याउने काम गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने –‘यसबाट भ्रष्टाचार निवारण भई मुलुकले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने’ छ । ... बाँकी अंश»
शिवपुरी बाबालाई भेट्न आएका सात सय बर्षीय युवा को थिए ?
२०७६ माघ १२ आइतबार, काठमाडौं । शिवपुरी बाबा भन्ने वित्तिक्कै एक आध्यात्मिक चिन्तकको चित्र मानसपटलमा आउने गर्छ । काठमाडौंको उत्तरको शिवपुरी जंगलमा आफ्नो आश्रम बनाएर बसेका भारतका केरलामा जन्मेका गोविन्दानन्द भारती कालान्तरमा शिवपुरी बाबा भनेर प्रख्यात भए। ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ १२ आइतबार, काठमाडौं। पछिल्लो केही सातायता विश्वभर एक घातक भाइरसको सन्त्रास फैलिएको छ। उक्त घातक भाइरसको नाम हो–कोरोना भाइरस। यो भाइरसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या शनिवारसम्म ५६ पुगिसकेको छ। साथै १ हजार ९ सय ७५ मा यसको संक्रमण देखिएको छ। यो भाइरस चीनको हुपेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको हो। ... बाँकी अंश»
स्वार्थ-त्याग जीवनको सर्वोत्तम निधि
२०७६ माघ १० शुक्रबार, काठमाडौं‌ । एउटा तालले नदीलाई भन्यो, 'ए नदी! तिमि महामुर्ख रहेछौ आफ्नो सारा पानी र सम्पूर्ण ऐश्वर्य समुद्रलाई दिइरहेछौ, यसो नगर । ... बाँकी अंश»
एमसीसीको विरोध गर्दै यी नेताले किन गाए ‘चिनियाँ’ गुणगान ?
२०७६ माघ १० शुक्रबार, सत्तारुढ दलका नेताहरु एमसीसीलाई लिएर फरक कित्तामा उभिएको कुरा नौलो होइन तर, सार्वजनिक कार्यक्रममै नेकपाका जिम्मेवार नेताहरुले कुनै एक मुलुकको गुणगान गाउँदै एमसीसीबारे टिप्पणी गरेको भने यो पहिलो पटक हो। ... बाँकी अंश»
२६ अक्षर रट्न पन्ध्र बर्ष, सत्य नाम हरि कृपा !
२०७६ माघ ९ बिहिबार, हाम्रो पाँच ज्ञानेन्द्रियहरू र पाँच कर्मेन्द्रियहरू छन् । पहिले एक शब्द भयो, शब्दबाट आकाश बन्यो। आकाशबाट वायु बन्यो, वायुबाट अग्नि बन्यो। अग्निबाट जल बन्यो अनि जलबाट पृथ्वी बन्यो । यी पाँच महाभूत भए जसलाई हामी पाँच तत्त्व पनि भन्दछौं अनि जब संसारको अन्त्य हुनेछ विनाश हुनेछ, तब फेरि पृथ्वी जलमा, जल अग्निमा, अग्नि वायुमा, वायु आकाशमा अनि आकाश शब्दमा लीन हुने छ। ... बाँकी अंश»
वास्तुशास्त्र अनुसार कस्तो जग्गा तथा घरले ल्याउछ खुशी ?
२०७६ माघ ८ बुधबार, काठमाडौं । घर मानिसका लागि वासस्थानको रूपमा प्रयोग हुने संरचना हो । मानिस सबै घरमा बस्छन् । हामी कस्तो प्रकारको घरमा बस्छौ, त्यसको निर्भर हाम्रो जीवनशैलीले गर्दछन् । हामी कहाँ रहन्छौं, कसरी घर बनाउँछौं, कसरी बस्तुहरु राख्छौं इत्यादि का आधारमा हाम्रो घर विविध आध्यात्मिक स्पन्दन प्रक्षेपित हुन्छन् । ... बाँकी अंश»
शासनमा हत्या–हिंशाको बर्चश्व: प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र पार्टी अध्यक्ष सबै व्यक्तिहत्याकै अभियोगी !
२०७६ माघ ८ बुधबार, नेकपाको पुर्ण बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाले आफनो सभामुखमा व्यक्तिहत्याको मुद्धामा त्यसको किनारा नलाग्दै, अदालतको तारेख धाइरहेका आरोपीलाई नै छान्नु पर्ने र सोही अनुसार उनी नियुक्त हुने पक्का भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया आयो – ‘अपराधीहरुको शासन त्यसै भन्या हो हामीले ?’ दीपक गजुरेलले यो ठाउँमा आफनो फोटो पनि राखेका छन अर्थात यो ठाउँमा यस्तो प्रतिकृया दिन उनले आफनो स्वाभाविक दायित्व नै मानेका बुझनु पर्छ । ... बाँकी अंश»
कानुनको धज्जी उडाइरहेको यो हाँसो
२०७६ माघ ८ बुधबार, अहिले सभामुखमा निर्विरोध भएका अग्निप्रसाद सापकोटाको बचाउ गर्दै हिँडिरहेका छन् । उनलाई नेकपाभित्रका उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट भन्दै बयान गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
सन् २०२० मा आउदैछ इबोला भाइरसको खोप
२०७६ माघ ८ बुधबार, यो क्रममा चिकित्सा क्षेत्रमा निकै उतारचढाव आएका छन्। तर यो क्रममा प्राणघातक मानिएको एचआईभी-एड्सको उपचार भने पत्ता लागेको छैन। अहिलेसम्म यो रोग लागेपछि मानिसको आयु केही समय बढाउने औषधिको भने विकास भइसकेको छ। यहाँ आगामी दशकमा पनि व्यापक मात्रामा प्रयोग हुने र पछिल्लो दशकमा विकास भएका केही चिकित्सा क्षेत्रको प्रविधिको उल्लेख गरिएको छ– ... बाँकी अंश»
फेरी ठूलो आयोजनामा चीन
२०७६ माघ ८ बुधबार, तमोरमा १ खर्ब ८९ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) मध्ये कम्पनीले ५१ प्रतिशत र पावर चाइनाले ४९ प्रतिशत लगानी गर्नेछ। ५८ अर्ब स्वपुँजी मध्ये ३० अर्ब कम्पनीले मात्र लगानी गर्नेछ। विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी गठन गरेर निर्माण अघि बढाउने भन्दै अध्ययन गरिरहेको आयोजनालाई लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले शोकेस गरेको थियो ... बाँकी अंश»
श्रीरामले नै तय गरेका थिए श्रीकृष्णको मृत्यु
२०७६ माघ ७ मंगलबार, द्वापारयुगमा भगवान्‌‌ श्री रामचन्द्रले भने जस्तै भयो । भगवान श्री कृष्णले यादव वंशको कुल नष्ट गर्नको लागि जुन मुसलको सृजना गरे त्यसको तीर बनाएर बालिले भाली रुपमा लुकेर भगवान्‌‌ को वध गरे । ... बाँकी अंश»